Uyini umoya? - Mytika Speak
Ikhaya / UNkulunkulu Nokwamoya / Uyini umoya?
Umoya wakho ukwandiswa komphefumulo wakho okukhona phakathi komphefumulo nomzimba wenyama. Uma unomphefumulo, unomoya. Unembeza wakho okhona ngaphandle komzimba wakho.
Isibonelo, uma uhleli egumbini lakho lokuphumula, umzimba nomphefumulo wakho kulelo gumbi lokuphumula kanye nawe. Umoya wakho, ongaqukethwe, kungenzeka ukuthi ubheke izingane zakho futhi ukwazise nge-a umuzwa uma kukhona okungahambi kahle.
Umoya wakho yiwo onika umphefumulo wakho i amandla lokuzizwa. Idlulisela imininingwane emuva naphambili phakathi komzimba wakho wenyama nomphefumulo wakho. Umphefumulo wakho ungabonakala njengogagasi lwamandla futhi umoya wakho ungabonakala njengezinhlansi zamandla.
Endabeni yezipoki, ubheka umoya womuntu. Yinguqulo engu-2D engaba nobukhona noma kwezinye izimo, ukubukeka okuqinile.
Uma uphupha, umphefumulo wakho usesemzimbeni wakho noma ngabe ufile. Umoya wakho ushiya umzimba wakho uhambe. Okuxakayo ukuthi ngenkathi uphupha, umoya wakho ungathathwa njengesipoki komunye umuntu ngoba angahle abone umoya wakho kuphela. Ngenkathi uphupha, umoya wakho ungahle uhlanganyele neminye imimoya futhi kujwayelekile ukuzwa umuntu ethi "ngikhulumile nogogo wami oshonile ephusheni lami."
Uma umuntu eku-coma, umphefumulo wakhe usesemzimbeni wakhe kepha akakwazi ukukhuluma noma ukunyakaza. Isizathu singenxa yokuthi umoya wabo ushiye imizimba yabo futhi uyazulazula. Lapho bevuka, umoya wabo ubuyela kubo.
Lapho ufa, umphefumulo wakho uyawushiya umzimba wakho. Umoya wakho kwesinye isikhathi ungabambezeleka ngoba awunasiqiniseko sokuthi uyaphi. Kwezinye izimo, umoya wakho ujoyina umphefumulo wakho ngokomoya ngokushesha. Ngezinye izikhathi, izama ukubhekisa emzimbeni womzimba. Lapho ithola ukuthi umzimba wenyama uhambile, ubuyela kokungokomoya ukuze uphinde uhlanganise nomphefumulo wakho. Umoya ungathatha isikhathi enyameni ukubuya kodwa ekugcineni ubuyela njalo emphefumulweni. Uma iphinda yahlanganiswa nomphefumulo, unenketho yoku baphinde bazalwe futhi. Le nqubo yonke yenzeka khona manjalo ngokombono womphefumulo wakho ngoba ayikho isikhathi nendawo kwezikamoya.
Fly juba fly, kude kangaka
njengoba ungakaze uphambuke.
Umphefumulo wami uyikhaya lakho
enhliziyweni yami ulele
ukuzwa njengemisebe yelanga.
Fly juba fly, hamba yonke indlela
ekhipha ithemba elikhulu
lapho ngikhetha ukuthandaza.
Ukuzinza kuphakama lapho
ibhalansi iba mpunga
onke amagama aba ukuthula
lapho ngaphakathi bahlala.
Fly dove fly, njengoba wenza nsuku zonke
lokho kwagcina ulwazi lungekho.
Ukunweba ingqondo yami lapho
njengobukhona bakho obuhlukile
Amathegiukuqonda izimpumputhe izinkondlo umphefumulo umoya ingokomoya